Mitaky RuNet madio ilay reniben’ny aterineto rosiàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2019 13:27 GMT
Mila aterineto ‘madio’ ve ny ankizy rosiàna? Eny, raha ny hevitr'ilay parlemantera Yelena Mizulina. Ao anatin'ilay nofaritany hoe ezaka iray hiarovana tsara kokoa ireo andian-taranaka tanora ao Rosia, manao antso amin'ireo mpanome tolotra aterineto ao amin'ny fireneny i Mizulina mba hametraka politika vaovao izay hibahana – tsy tonga dia hamela ireo mpampiasa ho afaka miditra feno amin'ny tontolon'ny Tranonkala.
Araka ny drafitra narosony, omena alàlana ireo mpanjifa hanaisotra ilay rafitra fanivanana, fantatra amin'ny hoe “ny aterineto madio,” saingy ny fanaovana izany dia ilàna manao fangatahana manokana any amin'ireo mpanome tolotra aterineto. Ilay rafitra naroso dia toy ny tsy misy valaka amin'ilay rafitra sivana tsy maintsy atrehana antsoina hoe ‘sahaza ny fianakaviana‘, napetraky ny any amin'ireo Fanjakàna Mitambatra (UK) tamin'ny taona 2013, mba hanakanana ireo tranonkala ara-dalàna izay vinavinaina ho 20% eo ho eo.
Ny andro namoahana ireo fanehoankevitr'i Mizulina ho fanta-bahoaka, nolazainy taminà vondrona iray mpivarotra matihanina momba ny teknolojia izay nvory tao amin'ny Douma fa ny iPhone sy ny aterineto finday dia manamora ny asa ‘fandotoana ankizy‘
Sarotra takarina ny lojika mirentirenty ao ambadiky ny nofinofin'i Mizulina hanisy tontolon'ny aterineto madio. Soa ihany, tao anaty antsafa iray niarahany androany tamin'ny gazety Izvestia, nohazavainy ny anton'ny fijeriny. Mba hahatakarana ny fomba fijerin'ilay tena renibe mavitriky ny RuNet, nezahan'ny RuNet Echo ny namintina ireo fantina rehetra avy amin'ny antsafa nataon'i Mizulina ho an'ny Izvestia.